Amandla eNyukliya, uKwakha nokuFudumeza, ukuGcinwa kwaManzi-KAIQUAN
I-Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd. yenye yezona mpahla zinkulu zokuvelisa impompo, ngokukodwa ekuphandeni nasekuyileni, imveliso kunye nokuthengiswa kweempompo ezikumgangatho ophezulu, iinkqubo zokuhambisa amanzi kunye neenkqubo zolawulo lwempompo. Ikhokelela kushishino lokuvelisa impompo e China. Inani labasebenzi liphela lingaphezulu kwe-5000, ebandakanya ngaphezulu kwe-80% yabanini beediploma zekholeji, ngaphezulu kweenjineli ezingama-750, injineli ephezulu noogqirha. Iqela KAIQUAN ungumnini parks 5 Industrial e Shanghai, Zhejiang, Hebei, Liaoning kunye Anhui kunye indawo iyonke 7,000,000 square metres.
(I-Hefei Sanyi Motor kunye noMbane weMpompo Co, Ltd. yayingoyena mvelisi ubalaseleyo kwiimoto ezinokuntywila kunye neempompo zombane zangaphantsi zombuso wase China).
Shijiazhuang Kaiquan oluludaka Pump Co., Ltd. yasekwa ngo-2005 kunye notyalo-mali iyonke ye-20 ezigidi zeerandi, egubungele indawo iyonke 47,000 square metres & indawo yokwakha malunga 22,000 square metres. Okwangoku, ineengcali ezingama-250, amagcisa aphezulu kwezobunjineli kunye nabasebenzi abanezakhono. Kukho umgca wemveliso yentlaka ehambele phambili kunye nabxube besanti abaqhubekayo. Zonke izinto ezilahlwayo zamkela isanti yokubumba isanti kwaye ineetoni ezi-2 kunye neetoni ezi-1 eziphakathi ezithandwayo ezinokuphosa itoni enye. Ukongeza, ineeseti ezingaphezu kwe-300 zezixhobo eziphambili.
I-Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd. yinkxaso-mali ye-KAIQUAN Group egubungela indawo engama-34,000 eemitha zesikwere kunye nendawo yokwakha ye-12,000 yeemitha zesikwere. Ngabasebenzi abangama-630 ngoku abaquka iinjineli ezingama-63 eziphezulu. Kukho iiseti ezingama-200 zoomatshini abaphambili ezinje ngezixhobo zomatshini we-NC, izixhobo zomatshini ezikhulu, izixhobo zokulinganisa ezikhawulezayo, uvavanyo olungenakonakalisa izixhobo ezizenzekelayo ze-welding.
I-Zhejiang Kaiquan Industrial Park yasekwa ngo-Septemba ka-1968 yaza yathiywa igama njenge-Zhejiang Kaiquan Pump Manufacturing Co. Ngoku inabasebenzi abangama-490 kunye neeseti ezingama-213 zokuqhubekeka nokuvavanya izixhobo ezinamandla emveliso yonyaka ngaphezulu kweeseti ezingama-100,000 ezinexabiso lemveliso yonyaka yezigidi ezingama-35 zeedola.
I-SKF isekelwe eChina naseShailand Kaiquan iya kwihlabathi jikelele
Ngomhla we-9 kaMay, 2018, uMnu Tang yurong, uSvenska kullager-fabriken weqela elisekela Mongameli kunye noMongameli we-SKF Asia, kunye noMnu Wang wei, Mongameli we-SKF China ...
IKaiquan Pump iphumelele "amaShishini amaQabane amaNtlalontle aPhezulu kuLuntu aPhezulu" wentlalontle yoluntu ...
Qhubeka! I-Kaiquan iphinda idweliswe kwi "Top 100 Chinese Machinery Industri ...
Nge-28 kaJulayi, i-China Machinery Industry Federation kunye ne-China Association of Automobile Manufacturers babambisene "nenkomfa yengcaciso yamashishini angama-100 aphezulu kumashishini oomatshini base China ngo-2021, ama-Enterpr ...